प्रचण्डले दरबारसँग साँठगाँठ गरे, विप्लव आतंककारी हुन् : प्रधानमन्त्री ओली - NEPIFY ,
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देखि आफ्नै पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डको समेत विरोध गरेका छन् । ओलीले हजो बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँगको भेटघाटमा प्रचण्डकै समेत विरोध गरेका हुन् । उनले भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान संविधान र व्यवस्थाप्रति जनाएको असन्तुष्टी र चलाइरहेको आन्दोलनलार्इ ओलीले आतंकवादी क्रियाकलाप भएको बताए ।
नेपालविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र भइराखेको छ ।
प्रचण्डमाथि खुकुरी प्रहारको समाचार झुठो , भ्रामक समाचार लेख्नेहरु कार्वाहीको निशानामा ! कस्ले लेख्यो ?
Posted on ६ मंसिर २०७५, बिहीबार Author NEPIFY
चितवन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि खुकुरी प्रहार भएको हल्ला कुप्रचार मात्रै भएको सचिवालयले जनाएको छ । गृह जिल्ला चितवनमा गएको बेला अध्यक्ष प्रचण्डमाथि खुकुरी प्रहारको प्रयासको कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो । प्रचण्डसँगै चितवन रहेका नीजि सचिव जोखबहादुर महराले अध्यक्षलाई बदनाम गर्न, भ्रम छर्न र कुप्रचार गर्न यसप्रकारको हल्ला […]
कार्यकर्ता र समर्थकलाई नेकपा को दशैं उपहार : दशैं लगत्तै आउँदैछ यस्तो खुशीको बाहार
Posted on ३१ आश्विन २०७५, बुधबार Author NEPIFY
नेकपाले एकीकरणका अल्झिएका काम सक्नेबारे छलफल गर्न कात्तिक ४ र ५ गते सचिवालय बैठक डाकेको छ । स्थायी समितिको बैठक १२ र १३ गतेका लागि बोलाइएको छ । अब बस्ने बैठकले जिल्लास्तरको एकताको गाँठो फुकाउने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि पूर्णता दिने योजना रहेको नेताहरूले जनाएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संयुक्त चुनावी गठबन्धन सुरु भएदेखि नै नेकपाका […]